မုန်းကြည့်ပါသည် | Layma's World
Filed under: Analysis, Personal, Tag |
« အမေးအဖြေ အကြိုက်ဆုံးကဗျာ … »
lay-ma, on November 28, 2008 at 1:19 pm said:
Ie မှာ error တက်လို့ပြင်လိုက်တာ ပို့ စ်လေးပျောက်သွားပြီး အမည်မဖော်လိုသူ ၈၇ နဲ့မွန်ရေးပေးထားတဲ့ ကွန်မန့် လေးတွေပါ ပျောက်သွားတယ်…။ အ်ိ…အိ… ဘီလိုလုပ်ရပါ့…။
မွန်, on November 28, 2008 at 1:33 pm said:
ဟဟ မွန်ပြောတဲ့ကောမန့်က မမကိုတက်မလို့ ကြံစည်ထားတာ
sin dan lar, on November 28, 2008 at 2:38 pm said:
၆။ အဲ..တို့ကိုမုန်းနဲ့နော် လေးမရယ်
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်, on November 28, 2008 at 5:37 pm said:
နံပါတ်.. ၁၊ ၃၊ ၅၊ ၁၀ အဟဲ….
ခင်လေးနဲ့ စွတ်ချွတ်ဘဲ သိလား..!!
SoeMoe, on November 28, 2008 at 9:07 pm said:
မမ..၁။ ၃။၄။၅။၁၀။ မမ နဲ့ တူမှတူ
မမ ကချစ်စရာလေး… 🙂
ဝေလေး, on November 28, 2008 at 10:46 pm said:
ဒါပေမယ့် မမလေးမပို့စ်လာဖတ်မှ တူတာတွေရှိနေသေးတယ်..
၁၊ ၂ ၊ ၄၊ ၅၊ ၇၊ ၉၊ ၁၀ …
အဲဒါတွေတူတယ်မမရဲ့.. 😛 😛
nu-san, on November 28, 2008 at 11:05 pm said:
နံပါတ် ၁ ကစပြီး တူတယ်.. နေဦး ပြန်ရေလိုက်ဦးမယ်..
၁၊ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၉ အဲဒါတွေတော့လေးမနဲ့တူတယ်.. အမလည်း တခါမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ မုန်းလိုက်တာလို့ မတွေးမိဘူး.. တခါတလေ နည်းနည်း စိတ်ပျက်တာတော့ ရှိတာပေါ့… 🙂
ညိမ်းညို, on November 29, 2008 at 2:32 am said:
မုန်းစရာအချက်တွေ လာဖတ်တာအစ်မလေးမရေ 😛
ပိုပီးတောင် ခင်စရာကောင်းနေပါရောလား 🙂
နံပါတ် ၈ လဲတူသဗျ အဟိ 😛
THS, on November 29, 2008 at 4:46 am said:
ဟ ဟ ဘိုညိမ်းက ကြော်ငြာတောင်ဝင်သွားသေး 😛 😛 😛
ကျွန်တော်ကတော့ နံပါတ်(၁၀) နဲ့တူတယ်ဗျ ၊ တစ်ယောက်ထဲနေရတာကိုကြိုက်တာ မုန်းစရာကြီးနဲ့တူတယ်နော် ။
ပိစိ, on November 29, 2008 at 2:36 pm said:
“အားကစား ၀ါသနာမပါခြင်း” မပါနဲ့.. အားပေးတယ်.. 😀 ဟာဟ တူလို့
အပျင်းလဲ များများထူ.. ကိုယ်သက်သာတယ်.. 😛 တူလို့
ကိုမျိး : မလေးမဆီ သွားလည်ပါ
ပိစိ : အင်း.. လည်ဖူးတယ်.. သူက မအားဘူးထင်တယ်၊ ပိစိကို အဖတ်မလုပ်ဘူး..
ကိုမျိုး : ဟာဟ.. သွားလည်ပါကွာ..
ရန်ကုန်မှာ အတင်းတုတ်တုန်း ပြောဖြစ်တာပါ.. ဟီးးးး
(မလေးမဆိုတာ.. ပိစိ ဘလော့မလုပ်ခင် ကိုသုညကို ၀င်ဖတ်ဖတ်နေကတည်းက တခါတလေ ဖတ်ဖူးတယ်..)
MhawSayar, on November 29, 2008 at 10:41 pm said:
ဒီလိုတော့လဲ အစ်မက မိန်းကလေး ဆန်တာတွေ ရှိနေပြန်ရောဗျာ။ 🙂
နံပါတ် (၂) ကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ အမုန်းဆုံး အချက်ကြီးနဲ့ သွားတူတယ်ဗျ။ ဖြစ်နိုင်ရင် လူတွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာပဲ နေချင်တယ်။
nhn, on December 1, 2008 at 4:04 am said:
နံပါတ်(၁) ပြိုင်ချင်တယ်ဗျို့။ ပြိုင်ကောင်းသလား မပြိုင်ကောင်းသလား တော့မသိ
သားကြွက်, on December 1, 2008 at 11:28 am said:
နံပါတ် ၅ တူတယ် တူဆို သားကြွက်တို့ က ဘလော့မောင်နှမတွေကို ဟုတ်တယ်မှတ်လား တီကြွက် 😛
ပုံရိပ်, on December 2, 2008 at 9:26 am said:
မလေးမကို အင်္ကျီရွေးပေးမယ့်သူ ရှိတာ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ။ တယောက်တည်း နေတတ်တယ့် အကျင့်က ဘလောက်ဂါ တော်တော်များများမှာ ရှိမလားပဲ။ ပုံရိပ်ယောင်ကမ္ဘာကို ခုံမင် ကြတယ် ဆိုတော့လေ။
Anonymous, on December 3, 2008 at 9:17 pm said:
၁။ ဘယ်နှစ်လက်မလောက်ထူသလဲ ဗျ ။ အနော်က ၁ ပေသာသာလောက်တော့ ထူသဗျာ ။ ကညိုထက်လိုတော့ ပြိုင်ချင်ပေါင် ။ ပြိုင်ရမှာ ပျင်းလို့ ။ 😛
၂။ စကားပြောဖို့တော့ ပျင်းမယ် မထင်ဘူး ဗျ ။ သိုင်းသိုင်းဝိုင်းဝိုင်းများများစားစား ကြားရတဲ့သူများ ကံကြီးပေတာပဲ ။ social ကတော့ ဟိုအရင်တစ်ပုဒ်မှာ ပါဖူးတဲ့ သားငါးသီးရွက် ဈေးဝယ်ထွက်သလို လုပ်ပေါ့ဗျာ ။ လိုအပ်တယ် ဗျ ။ တကယ် ။ 🙂
၃။ ဒါတော့ ကလေးစိတ်မကုန်သေးတဲ့ လက္ခဏာပေါ့ ဗျာ ။ ငယ်ငယ်ကဆို ထမင်းခွံကျွေးရင် စားဘူး စားဘူးနဲ့ ဆော့ချည်းနေတာမျိုး ။ မုန့်သည်တွေ ဖြတ်သွားကာမှ အော်ခေါ် ။ ဝယ်မကျွေးရင်လည်း ငိုသေး ဆိုတာမျိုး ဖြစ်မပေါ့ ။ 😀
၄။ ဧကန္တတော့ အတော်ကို လေးအိ ဝဖိုင့်လာပုံရတယ် ။ 😛 အဆီကျမလားဆိုပြီး သွားမစားလေနဲ့ဗျ ။ မျက်ရည်တွေ နှပ်တွေပဲ ကျလာလိမ့်မယ် ။ ရှူး ရှဲ .. ရှုး ရှဲ နဲ့ ။ 😀
၅။ မုန်းစရာလားဗျ ။ မာဆတ်ဆတ်ဆို ကျိုးလွယ် ကြေလွယ်သနဲ့ ။ ပျော့တော့ ညွှတ်ညွှတ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့ flexible ဖြစ်တယ်ပေါ့ ။ အရှုံးပေးဖို့ လိုအပ်တာမျိုးမှာ ပေးသာပေးလိုက်ဗျာ ။ အရှုံးဆိုတာ မပေးပဲ သိမ်းထားလို့ ကောင်းတာမျိုးမှ မဟုတ်တာနော့ ။
၆။ ဟိုက် !!! အီ … နာမည်တော့ အပျက်ခံလို့ မဖြစ်ချေဘူး ။ ပိုင်အောင်တော့ ပေါင်းထားမှပဲ ။ အဟဲဟဲ ….တငယ်ဂျင်းရေ ။ ခင်တယ်မင်တယ်နော်။ ပြောမှား ဆိုးမှားရှိရင် ခွေ့လွှတ် ။ အယ် ဟုတ်ပေါင် ။ ခွင့်လွှတ်နော် ။ အဟီး ဟီး ..။
၇။ ဝါသနာမပါလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တယ် ဆိုတော့လေ ..။ အကြံပေးမယ်နော် ။ အဲ့ဒီဝါသနာမပါတာချည်းကို တကုတကလုပ်တယ်လည်း မဖြစ်အောင် ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့လည်း လုပ်ပြီးသားဖြစ်အောင် အိမ်ကနေ အလုပ်သွားရင် ကားတွေဘာတွေ မစီးနဲ့ဗျ ။ ကုန်းကြောင်းလျှောက် ။ အလုပ်က အိမ်ပြန်တော့လည်း လမ်းလျှောက် ။ အဟဲ ..ကောင်းဘူးလားဗျာ ။ 🙂
၈။ အော် …. ဒါကတော့ လုပ်ပေးရမှာပေါ့လေ။ လူ့တစ်ကိုယ်လုံးမယ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဖြစ်ဆုံး ပြင်ဆင်ပြုပြင်လို့အကောင်းဆုံးဟာ ဆံပင်ပဲ မဟုတ်လားဗျ ။ ပက်ကျံကုန်တာများဗျာ ။ ဟော့ .. ဆံပင်အသစ်လေးနဲ့ အိမ်ပြန်လာ ။ မှန်လေး တကြည့်ကြည့်နဲ့ ။ relax ဖြစ်မယ် ။ refresh ဖြစ်တယ် ။ ကောင်းတယ်ဆရာ ..။ လုပ်သာလုပ် ။ အဟုတ် ..။ အာဖရီကန် ကေတော့ မလုပ်လေနဲ့ဗျနော် ။
၉။ အာ ဟ ..ဒီတခုတော့ အန်ကယ်ကောင်းကင်က ကျေးဇူးတင်မှာ အသေအချာပဲ ။ ရှားမှရှားပဲဗျို့ ။ မရွေးတတ်တာ မုန်းစရာမှ မဟုတ်တာပဲ ။ ကိုယ့်ဆရာက ဘာဝတ်ဝတ်ကြည့်ကောင်းပြီးသားပဲလေ ။ အဟုတ်ဗျာ ။
၁၀။ ဒီအချက်ကတော့ဖြင့် မကောင်း ။ အထူး မကောင်း ။ အတော် မကောင်း ။ အလွန် မကောင်း ။ အဟုတ် မကောင်း ။ တကယ် မကောင်း ။ အမှန် မကောင်း ။ မကောင်းရေးချ မကောင်း … ။ မ .. သဝေထိုး ကကြီး ရေးချ ငသတ် ဝစ်စနှစ်လုံးပေါက် မကောင်းပါခင်ဗျာ ။
အရင်ခေါင်းစဉ်က ခဲရာခဲဆစ် မုန်းကြည့်ပါသည်ဆိုလားပဲ ။ ဒါဆို ဒီ ၁၀ ချက်က ရှာရှာဖွေဖွေ မုန်းရလေတာပဲ ။ မမုန်းလောက်ပေမဲ့ အားမလိုအားမရဖြစ်တာမျိုးတွေပဲ ဆိုတော့ တော်ပါသေးတယ်လေ ။ အမှတ်စဉ် ခွဲပြီး စဉ်းစားကြည့်မိတယ် ။
၄ ၈ ၉ ။ မျက်စောင်းပင် မထိုးသင့် ။
၁ ၃ ၇ ။ အလွန်အကျွံမဖြစ်သင့် ။
၂ ၅ ၆ ။ ဖျောက်နိုင်က ဖျောက်သင့် ။
၁၀ … သေးငယ်ပေမဲ့ ကြီးကျယ်တတ်သမို့ အဲ့ဒီ ၁၀ ကို မုန်းတယ်မုန်းတယ်သာ ပြောလိုက်ဗျာ ။
တငယ်ဂျင်းရ ။ အချင်းချင်းတွေပဲနော် ။ နံပါတ်ခြောက်ကိုတော့ ကြောက်သကွဲ့ ။ အဟဲ … ။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေကြောင်းပါ ကိုယ့်ဆရာရေ့ ။
မွန်, on December 4, 2008 at 7:31 am said:
ဒါဆိုမမအတွက် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်၁၀ချက်ကိုရွေးပေးမယ် ၁။ရိုးသားခြင်း ၂။နှုတ်လုံခြင်း ၃။သူတပါးကိုဂရုစိုက်ခြင်း ၄။မိမိကိုဂရုစိုက်မှုကိုလဲ နှစ်ခြိုက်ပြီး တန်ဖိုးထားခြင်း ၅။ရန်ရှောင်ခြင်း ၆။သို့သော်မတရားမှုကိုမုန်းခြင်း ၇။ချစ်မွှေးပါခြင်း ၈။ထူးခြားရှုထောင့်မှတွေးမြင်ခြင်း ၉။မျှဝေလိုခြင်း မျှယူလိုခြင်း ၁၀။ဟာသဥာဏ်ရှိခြင်း ဒါကမွန်ရေးတဲ့ အသိသာဆုံးသူတပါးနဲ့မတူတဲ့ မမရဲ့ကောင်းခြင်း၁၀ချက် နောက်ရှိသေးတယ် ၂ယောက်ထဲကျမှ ပြောပြတော့မယ် ဟိ
ShwunMi, on December 5, 2008 at 10:22 pm said:
ဟိ.. နောက်ကျမှ လာကြည့်မိတယ်..
တော်တော်များများတူနေပြန်ပြီ.. ဗိသုကာ မဟုတ်တာက လွဲလို့..။
အပျင်းထူ.. စကားနည်း.. အားကစားမလုပ်.. တစ်ယောက်ထဲ ကွန်ပြူတာနဲ့နေ..
အစ်မဆီကနေ အိုင်ဒီယာတွေ မီးညှိသွားတယ်.. =)